နေပူထဲမှ ပြန်လာကာ ရေတန်းချိုးခဲ့သော (၁၅)နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်တစ်ဦးသေဆုံး...! - Thadin
HomeNEWSနေပူထဲမှ ပြန်လာကာ ရေတန်းချိုးခဲ့သော (၁၅)နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်တစ်ဦးသေဆုံး…!
နေပူထဲမှ ပြန်လာကာ ရေတန်းချိုးခဲ့သော (၁၅)နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်တစ်ဦးသေဆုံး…!
April 25, 2019 Kay Kay NEWS Comments Off on နေပူထဲမှ ပြန်လာကာ ရေတန်းချိုးခဲ့သော (၁၅)နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်တစ်ဦးသေဆုံး…!
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မအူပင်မြို့နယ် တလုပ်လပ်အရှေ့ကျေးရွာတွင် ယနေ့ ဧပြီလ (၂၄)ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းက နေပူထဲမှ ပြန်လာသော ကလေးငယ်တစ်ဦးမှ ရေဆင်းချိုးရာ သေဆုံးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
“ကလေးကနေ့ခင်းဘက် ကွင်းထဲကပြန်အလာ ရာသီဥတုအရမ်းပူလွန်းလို့..ရေဆင်းချိုးလိုက်တာ ဒီရာသီဥတုရဲ့..ဒီ နေအပူဒါဏ်နဲ့……လေတန်းဖြတ်ပြီး မကြွေသင့်တဲ့အရွယ်လေးကြွေလွင့်သွားခဲ့…တယ်”ဟု တလုပ်လပ်ကျေးရွာရှိ အနှိုင်းမဲ့ နာရေးကူညီရေးအသင်း၏ တာဝန်ရှိသူက ၎င်း၏ဖေ့စ်ဘုတ် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားသည်။
ယင်းနေပူထဲမှ ပြန်လာကာပူလွန်သောကြောင့်ရေဆင်းချိုး၍ ကွယ်လွန်ခဲ့သူမှာ မအူပင်တံတားဘေးတွင်နေထိုင်သော မောင်ထွေးဖြစ်ကာ အသက်(15) နှစ်သာရှိသေးသောကလေးငယ်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
Photo – San Shin ပြည့်ဖြိုးပိုင် (MHT)
ဧရာဝတီတိုငျးဒသေကွီး မအူပငျမွို့နယျ တလုပျလပျအရှကြေ့ေးရှာတှငျ ယနေ့ ဧပွီလ (၂၄)ရကျနေ့ နလေ့ညျပိုငျးက နပေူထဲမှ ပွနျလာသော ကလေးငယျတဈဦးမှ ရဆေငျးခြိုးရာ သဆေုံးမှုဖွဈပှားခဲ့ကွောငျးသိရသညျ။
“ကလေးကနခေ့ငျးဘကျ ကှငျးထဲကပွနျအလာ ရာသီဥတုအရမျးပူလှနျးလို့..ရဆေငျးခြိုးလိုကျတာ ဒီရာသီဥတုရဲ့..ဒီ နအေပူဒါဏျနဲ့……လတေနျးဖွတျပွီး မကွှသေငျ့တဲ့အရှယျလေးကွှလှေငျ့သှားခဲ့…တယျ”ဟု တလုပျလပျကြေးရှာရှိ အနှိုငျးမဲ့ နာရေးကူညီရေးအသငျး၏ တာဝနျရှိသူက ၎င်းငျး၏ဖစျေ့ဘုတျ လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာမှာဖျောပွထားသညျ။
ယငျးနပေူထဲမှ ပွနျလာကာပူလှနျသောကွောငျ့ရဆေငျးခြိုး၍ ကှယျလှနျခဲ့သူမှာ မအူပငျတံတားဘေးတှငျနထေိုငျသော မောငျထှေးဖွဈကာ အသကျ(15) နှဈသာရှိသေးသောကလေးငယျတဈဦးလညျးဖွဈကွောငျးသိရသညျ။
Photo – San Shin ပွညျ့ဖွိုးပိုငျ (MHT)
မြမြ ဝိညာဉ်အကြောင်းနဲ့အထက်လမ်းဆရာအထင်အမြင် ( ရုပ်သံ )
ရုပ် အ ဆင်း လှ ပေ စေ သော ကု သိုလ် ( ၄ ) မျိုး…!
This Month : 41087
This Year : 236485
Total Users : 595509
Total views : 2735135